I-china CY-5 (iingubo zombane ezikrelekrele zombane) kunye nabathengisi | Jialong
Ukukhokela ukomisa komoya okrelekrele
I-110-220v / 50Hz
amandla emoto 130w
Amandla okukhanyisa 12w ukomisa amandla 400W * 2
Amandla okuzala e-UV 3w * 2 Amandla omoya omileyo 6w * 2
ukwakheka kwezinto ingxubevange yealuminium Ukubetha ngocingo 1.15-1.26m
Ubude bokubamba 1.3m Ukutyeba injini engundoqo 8cm
Ububanzi bomamkeli 31.5cm Uluhlu lokunyusa I-0.15-1.2m
Ukusinda okushiyekile 12-18kg owona mthwalo uphezulu 35kg
umbala Umlotha wentsimbi, igolide yenyuka, isilivere yomkhenkce
Umatshini opheleleyo we-818 oneentonga ze-telescopic ezikhethiweyo ezi-4, ubude: 13m + 1m
(4 imivalo emhlophe ethe tye: 2.4m)
1, Aluminium wemagniziyam ingxubevange ixesha elide, non irusi, non ezinokutsha, unyango maleko ezintathu-phambili, non iphela, ekuqaleni ukumelana kwaye kulula ukuba anyamekele.
2, unyango umphezulu Electrophoretic yenza ubuso kwendawo yethu egudileyo kwaye wongeza imvakalelo kwinqanaba eliphezulu.
I-3, sisebenzisa i-motor ephezulu yokusebenza, amandla anamandla, kunye nokukhuselwa okugqithiseleyo, ukuzola okuphantsi, izixhobo zokugcina amandla, ubomi obunamandla.
I-4, intonga yokumisa i-quilt inokugoqwa, ekulungeleyo ukugcina indawo, kwaye uyilo lokujika luhle kakhulu kwaye lulula.
Indawo yokuhlohla:Iimveliso zethu zinokufakwa kuphahla lwe-gypsum, uphahla oluhlanganisiweyo kunye nophahla lwesamente.
1: Isilawuli esikrelekrele esikrelekrele, ukusebenza ngokulula, ukuphakamisa izinto kude, ukuphendula iqhosha elinye.
I-2: Ifakwe isibane se-12W sokukhanya kwezibane ze-LED, akukho sidingo sokufaka ezinye izixhobo zokukhanyisa ngaphakathi kwe-15 yeemitha zesikwere, khanyisa ikona nganye ye-balcony, ukunciphisa ingxaki yeempahla ezininzi kakhulu ezivimba umgca wokubona kwinkqubo yokomisa.
Imimango yokuma eyomileyo, ukuhlangabezana neemfuno zokomisa usapho lonke, izithuba zenzululwazi, ukungena komoya kunye nokulula ukomisa, kunokuba kukomisa tyaba, kuthintele ukunxaxha kwempahla.
I-4: Iindlela ezimbini zokomisa, ukuhambisa umoya ofanayo ukusuka phezulu ukuya ezantsi, ukugubungela ngokufanelekileyo iimpahla zokomisa, ukukhawulezisa ukujikeleza komoya, kwaye wenze iimpahla zome ngokukhawuleza ngaphandle kokonakalisa iimpahla.
I-5: Isibane se-UV esibulala iintsholongwane, sikhusela impilo, sinokuthintela iintsholongwane kwimpahla, iintsuku ezinemvula zinokonwabela ukukhanya kwelanga.
Inkqubo yokulawula okrelekrele yenza ukuba kukhuseleke ukumisa kwimeko yokuphazamiseka. Ngexesha lokwehla, iimpahla ziyokuma ngokuzenzekelayo xa zihlangabezana nezithintelo, ukukhusela abantu noomatshini.
I-7: Isakhelo sesikere seAluminiyam, indawo yokubeka ikhadi, intambo yocingo lwentambo isiqinisekiso esiphindwe kabini, sikhuseleke ngakumbi.
Egqithileyo CY-6 (Aluminium kwendawo yokuhlala)
Okulandelayo: I-CY-4 (iimpahla zombane ezikrelekrele)